Madzimai oita mari nenyemba | Kwayedza
Madzimai oita mari nenyemba
06 Jul, 2014 - 05:07	 2014-07-06T05:57:24+00:00 2014-07-06T05:57:24+00:00 0 Views
MADZIMAI emushandirapamwe weChimushonga Women In Agriculture kwaShe Chiswiti kuMt Darwin vanoti (kubva kuruboshwe) Mai Winnie Makina Mariyapera, Mbuya Lessy Marovahopo, naMai Susan Makausi apo vaiva mudura raMbuya Marovahopo mune nyemba dzakamirira kupurwa. — Mufananidzo: Kingstone Mapupu
MUSHANDIRAPAMWE wekurima wemadzimai weChimushonga Women In Agriculture kudunhu rashe Chiswiti kuMt Darwin woita zvinorova apo varimi ava vari kurima nyemba idzo dziri kuvawanisa pundutso mukurarama kwavo.
Sachigaro wemushandirapamwe uyu, Mai Winnie Makina Mariyapera (48), vanoti basa rekurima vakaritangisa makore mashanu akadarika nedonzvo rekusimudzira upenyu hwemadzimai nekuvandudzawo utano hwemhuri dzavo.
“Semadzimai takaonawo muno mumusha waSabhuku Chimushonga kuti tivambe basa rinonzi ndere madzimai richisimudzira mhuri dzedu, kubva pakatanga chirongwa ichi vana vedu havachawanikwa vaine zvirwere zvinokonzerwa nekushaya kudya kune ruwomba, zvigwindiri zvoga uye dzimwe tinotengesa tichiwana mari,” vakadaro Mai Mariyapera.
Vanoti sevanhu vasina pekuchengetera zvirimwa izvi pakanaka, vanoisa nyemba idzi mumisha yenhengo dzavo dzakasiyana umo vanofamba vachipura nekuisawo mumasaga. “Matura edu madiki saka tikakohwa nyemba idzi tinodzichengeta mudzimba dzenhengo dzedu, tozopura tichiisa mumasaga towirirana kuti totengesa zvakawanda sei,” vakadaro.
Vanoti vakaona kuti chirimwa ichi chinofambirana zvikuru nevhu rekudunhu ravo uyewo nemanairo emvura yenzvimbo iyi.
“Kuno hakunaye mvura zvakanaka saka nekuda kwenyemba tapunduka, tava kutokurudzirawo mamwe madzimai kupinda mubasa iri,” vakadaro.
Mai Mariyapera vanoti vanogadzirawo masamba kubva muchirimwa ichi mushure mekutanga vadzikanga uyewo nekugadzira rupiza kunova kudya kwepasichigare. Mbuya Lessy Marovahopo (61) vanova mutevedzeri wasachigaro mumushandirapamwe uyu vakakurudzira mamwe madzimai kutangisa mabhindauko emawoko.
“Kunze kwekurima nyemba, tinorimawo zvimwe zvirimwa zvinosanganisira nzungu, chibage, muriwo, matomatisi, derere nemapfunde zvinoita kuti mhuri dzedu dzigare dzakaguta,” vakadaro Mbuya Marovahopo.
Vanoti vane makirabhu ekudzidzisana magariro akanaka mudzimba nevarume zvakare, izvo vakati ndizvo zvinosimbisa basa ravo nekuti varume vavo vanenge vachiona kunaka kwebasa ravo munyaya dzekurima.
Kunze kwazvo, madzimai aya anorima mapindu vachishandisa mvura kubva murwizi rwaMukumbura.
“Hakuna mudzimai asina bindu kuno tinorima zvirimwa zvose tiri mumushandirapamwe wedu uyu,” vakadaro.